နေအိမ် / Uncategorized
grade, အမျိုးမျိုး, သို့မဟုတ် sizing အားဖြင့်မြေတပြင်လုံးနှင့်အခြားလယ်ယာကုန်ပစ္စည်းကြောင်းအစားအစာများရွှေ့, အလေးချိန်ပေါင်, အရိပ်, သို့မဟုတ်ရောဂါ. Job Skills Prerequisite Rank and sort products according to elements such as for example color, အမျိုးအစားများ, အရှည်, ပိုမိုကျယ်ပြန်, ကြည့်ရှု, အာရုံ, အမှေး, နှင့်အရည်အသွေးသေချာသင့်လျော်သောကိုင်တွယ်နှင့်အသုံးပြုမှုအောင်. Toss malfunctioning …
Transcribe အမျိုးမျိုးသောအီလက်ထရွန်းနစ်သုံးပြီးသည်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆေးသမားကယ်တင်ခဲ့အစီရင်ခံစာများ, သတင်းအချက်အလက်ထင်မြင်ချက်များ addressing, အရေးပေါ်အခန်းလာရောက်လည်ပတ်သူ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံရိပ်သုတေသန, လုပျထုံးလုပျနညျး, အလုပ်ခွင်လည်ပတ်မှု, နှင့်ကျန်ရှိနေသောအကျဉ်းချုပ်. လုံးဝနားလည်လွယ်ကြောင်းအမျိုးအစားသို့အာဏာရှင်အကောင့်များနှင့်အပြောင်းအလဲအတိုကောက်. Edit as essential and reunite reports regarding unique and evaluation in …
စုဝေး, ဆင်ယင်, သို့မဟုတ်သားရေနှင့်သားရေကဲ့သို့ပစ္စည်းများ restore, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်အိတ်ကိုများအတွက်အဖြစ်, ဖိနပ်. Career Skills Qualification Cut right out styles that are subsequent, ဒြပ်စင်သို့မဟုတ်ဖော်ပြထားတယ်, ကတ်ကြေးလျှောက်ထား, ညှပ်, ဓါး, သို့မဟုတ်စက်ကလစ်. တိုးတက်, န့, သို့မဟုတ် features တွေ-အဆိုအရသားရေထုတ်ကုန် restore, ချုပ်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်နှင့်နှောင်ကြိုးသုံးပြီး, ပစ္စည်းကိရိယာများဇာ, တုတ် …
မိုင်း Shuttle ကားလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများနမူနာ
အစိတ်အပိုင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်မှအော်တိုပေါ်ကိုသို့မဟုတ်သတ္တုတွင်းမှမျက်နှာ-အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှမြေအောက်ကျောက်မိုင်းအတွက်ဒီဇယ်သို့မဟုတ်အာဏာ operated လွန်းအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်. Career Skills Requirement Manage conveyors that work the whole period of shuttle autos to disperse hundreds as packing progresses. Get loaded taxi vehicles to ramps and go settings to eliminate lots …
သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း installation နဲ့ repair, မော်တော်ယာဉ်များကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / Jobs and Duty Template Deploy, ခွဲခြားသတ်မှတ်, သို့မဟုတ်ပြုပြင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ထင်ရ, ဆက်သွယ်ရေး, မော်တော်ကားတွင်သို့မဟုတ် routing ကိုဂီယာ. Job Skills Need Splice cables with lowering or knives pliers, လ်တာနှင့်ဂီယာနှင့်ဂဟေဆက်ဆက်သွယ်မှု. အလိုအလျောက်ကိရိယာများနှင့်အတူပြဿနာများကိုထောက်လှမ်းသို့မဟုတ် restore, …
Print Binding And Finishing Workers Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Cleaning, Washing, and Metal Pickling Equipment Operators and Tenders Job Description / Tasks and Responsibility Template Perform or tend equipment clean or to scrub products, such as for instance drums or kegs items, tin plate, အစားအစာများ, pulp cheap, သို့မဟုတ်ဆီလီကွန်, to eliminate impurities. Job Skills Need Work or tend machines …
Criminal Investigators And Special Agents Job Description / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
Investigate assumed felony infractions of Fed, ပြည်နယ်, or neighborhood guidelines to ascertain if research is enough to advocate justice or claimed. Job Skills Qualification Acquire and confirm research by noticing and selecting witnesses and thinks or by considering documents. File research and files, utilizing equipment such as cams and photocopy …
ခရီးသွားလမ်းညွှန်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty Template ကို
မဟာဗျူဟာ, ညီညာစေ, နှင့်ခရီးဝေးခရီးလုပ်ဆောင်, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, နှင့်ရှေးရှေးနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ခရီးစဉ်. Job Skills Prerequisite Program visit itineraries, တည်နေရာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အားလပ်ရက်နည်းလမ်းနားလည်မှုအသုံးချဖို့. နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှဖြေရှင်းရန် , ထောက်ပံ့, သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်. အားလပ်ရက်အပေးအယူမြှင့်တင်ရန်. ထိုကဲ့သို့သောဥပမာခန်းများအတွက်အဖြစ်တောင်းဆိုခြင်းအလည်အပတ်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို, တင်ဆောင်, …
သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
လမ်းညွှန်သွားဆရာဝန်, set ကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုတက်, ကုထုံးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုပွငျဆငျ, နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုထိန်းသိမ်း. Career Skills Requirement Make individual, တူရိယာပိုးမွှားသတ်သို့မဟုတ် sanitize, set tool ကိုကွန်တိန်နာတက်, သယံဇာတရင်းမြစ်များကို ပြင်ဆင်., သို့မဟုတ်သွားဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းနည်းစနစ်စဉ်အတွင်းသွားဆရာဝန်ကူညီ. သွားရောဂါရှာဖွေ x ကိုရောင်ခြည်ဖော်ထုတ်. သမိုင်းရောဂါပျောက်ကင်းအင်ဖိုအတွင်းလူနာဖိုင်တွေ. Take and report important signs …
လက်တွေ့သူနာပြုအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
အစီအစဉ်, မူလတန်း, ဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်နေ့စဉ်လူနာစောင့်ရှောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုသြဒိနိတ်. သိပ္ပံနည်းကျမူဝါဒများထူထောင်နည်းလမ်းများရန်လိုက်နာမှုသေချာ, ဒေသခံ, နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုစံ. Career Skills Prerequisite Co-ordinate or conduct informative programs or inservice training sessions on topics for example scientific procedures. အသိပေးစာ, အင်တာဗျူး, and determine sufferers to recognize care …
စာမျက်နှာ 1 ၏ 5612345 » 102030...နောက်ဆုံး »